MADAXDA SOOMAALIDA WAXAY KA BAXSANAYAAN WADANKOODA.
DFKMG oo Hub Loo soo Mariyay dalka Uganda oo Ciidamoodu joogaan Muqdishu - Daily Nation
Inta badan xubnihii baarlamaanka iyo wasiiradii Soomaalida waxay u baxsadeen dibada sababtuna waxay tahay dagaalka u dhexeeya kooxaha islamiyiinta ah iyo ciidamada dawlada oo si xawli ah ooga socdo caasimada Soomaaliya.
Waxa la xaqiijiyay ku dhawaad 300 (MP) oo xildhibaano ah ay haatan wadanka ka maqan yihiin taasoo tilmaamayso in baarlamaanku qaadan karin fadhi maadaama oo kooromku buuxsamaynin.
Sida laga soo xigtay masuuliyiinta baarlamaanka 288 xub nood ayaa 24.6.2009 wadanka ka maqnaa tiradaas 50 ka mid ah waxay ku maqanyihiin safar shaqo inta kale way iska tageen waxayna joogaan wadamada dariska ah sida Ethiopia, Jabuti, Kenya iyo wadamada reer galbeedka sida Sweden, Ingiriiska, Holand ,Norway, iyo Maraykanka ,
Abdalla Haji Ali oo ah xubin barlamaan waxuu yiri: kama mid ahaankaro dawlada Soomaaliya hadiiba ayna idifaaci karin naftayda.
Agoosto 10, 2009 waa marka ay guddiga xadaynta badahu la kulmayaan dalalkii akhbaarta u gudbiyay wixii ka horeeyay May 8, 2009, dalalka xogta gudbistay waxaa ka mid ah Kenya oo cabiratay badda Soomaaliyeed. Baarlamaanka DFKMG ayaa laga rajaqabay in ay shiraan ka hor taariikhdaas oo heshiiskii is-afgaradka ka dhigaan waxba kama jiraan, maadaama aan heshiiskaas wax dan ahi ugu jirin Soomaalida, taas oo jirtana ay xukuumadda oo wasiiradeeda qaarkood garabsanaysa ay difaacdey heshiiskaas.... Daawo Halkan
550 baarlamaanku ka koobanyahay si uu fadhi u yeesho isla markaana uu go'aamo u gaaro waxaa lagamamaar maan ah inay joogaan ugu yaraan 2/3 sadex meelood labo meelood.
Gudoomiyaha baarlamaanka waxuu ku booriyay xildhibaanadda inay yimaadaan caasimada Soomaaliya, sidoo kale wasiirka maaliyadda waxuu joojiyay mushaarkii 144 xildhibaan oo dibada kumaqan.
Saa in qaranka loo shaqeeyaa hadii aadan yeelaynin waa inaad is casishaa intaadan cararin kahor sidaa waxaa yiri Sheikh Ahmed Moalim oo ka tirsan baarlamaanka kuna sugan muqdisho, sida ay werisay Reuters.
Wadanka Soomaaliya waa qasan yahay reer galbeedku waa ka wal wal sanyihiin.
Dawlada (FKMG) Soomaaliya waxay caawimo waydiisatay caalamka iyo dawladaha dariska ah ooy ciidan ka dalbatay, dalbashada ciidamada dariska waxaa cambaareeyay kooxaha dawlada kasoo horjeedo ayagoo ka digay faragalin dibada ah cawaaqib xumada ka imaan doonto.
Sirdoonka reer galbeedka waxay ka wal wal sanyihiin xaalka Soomaaliya waxayna ka baqayaan xaalada sii xumaanayso iyo tabar darada dawlada Soomaaliya inay ka faa iidaystaan islaamiyiinta ooy wadanka qabsadaan.
Reer galbeedku arinta sida aadka ah ay ooga baqayaan waxaa weeye kooxaha islaamiyiinta ee laga baqayo inay wadanka la wareegaan waxaa loo malaynayaa inay xiriir la leeyihiin uruka Al-qaacida taasoo ah arin wal wal xoogleh ku hayso reer galbeed ka.
Dagaalada Soomaalida u dhexeeyo waxaa ku dhintay bishii 5aad kadib boqolaal dad ah dadkaas dhintay waxaa kamid ah wasiirkii Amniga iyo taliyihii booliska ee caasimada Soomaaliya ee Moqadisho.
UN ku waxay qiyaaseen in 159 000 oo qof ay ka carareer guryahoodii bilihii oogu dambeeyay dagaalka socdo dartii.
TV-ga qaranka Finldand: http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2009/06/somalijohtajat_pakenevat_ulkomaille_824022.html
iyo Reuters http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSLO890231
Waxaa diyaariyay Eng Idiris Hassan Farah
Faafin : SomaliTalk.com | June 26, 2009